आफ्नै श्रीमति लाई कु टपि ट गरी ह त्या गरे यी राईले! – List Khabar
Home / समाचार / आफ्नै श्रीमति लाई कु टपि ट गरी ह त्या गरे यी राईले!
आफ्नै श्रीमति लाई कु टपि ट गरी ह त्या गरे यी राईले!
admin3weeks ago समाचार Leaveacomment 27 Views
धरान । सुनसरीमा आफ्नै श्रीमतीलाई कु टपि ट गरी ह त्या गरेको आरोपमा प्रहरीले श्रीमानलाई पक्राउ गरेको छ।
धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ निराजन बस्ती बस्ने ४१ वर्षीय महेन्द्र राईमाथि आफ्नै ३४ वर्षीया श्रीमती छुङ्कु मगर राईको कु टपि ट गरी ह त्या गरेको आरोप छ । सोही आरोपमा प्रहरीले राईलाई सोमबार साँझ पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जानकारी दिएको छ। महेन्द्रको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएकी छुङ्कुको धरान घोपा अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृ त्यु भएको हो।
अस्पतालमा मृ त्यु भएको भन्ने खबरपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । घटनाको विषयमा थप अनुुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सिजी नेटले ६४९ रूपैयाँ प्रतिमहिनामा ५० एमबीपीएस स्पिडको नट चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले सिजीनेटको सेवामा नयाँ र सस्तो ‘सुपर सस्तो प्याकेज’ सार्वजनिक गरेको छ।प्याकेज अन्तर्गत ग्राहकले मासिक ६ सय ४९ रूपैयाँमा ५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउनेछन्।सिजीका अनुसार यो प्याकेज १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र १ वर्षका लागि उपलब्ध छ।
कम्पनीका अनुसार यी प्याकेज लिन चाहने ग्राहले जडान खर्च र ड्रप वायरका साथै सिंगल ब्यान्ड राउटर निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन्।कम्पनीले यसअघि नै प्रति महिना ९९९ रूपैयाँमा १२० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट वितरण गरिसकेको छ।
Previous आजदेखि लगातार तीनदिनसम्म सार्वजनिक विदा दिनुको यस्तो कारण
Next एयरहोस्टेसले विमान भित्रै यस्तो कार्य गरिरहेको भिडियो लिक भएपछि….